Global Voices teny Malagasy » Filoham-pirenena vaovao feno misitery ao Goatemalà · Global Voices teny Malagasy » Print
Filoham-pirenena vaovao feno misitery ao Goatemalà
Voadika ny 02 Jolay 2019 12:39 GMT 1	 · Mpanoratra Connectas Nandika (en) i Alexandria Harris, Sylvia Aimée
Ny filoham-pirenena vaovao ao Goatemala, Jimmy Morales, miresaka amin'ny media. Sary: Plaza Pública.
Nosoratan'i Carlos Carlos Arrazola ho an'ny Plaza Pública de Guatemala  ity lahatsoratra ity ary noho ny fifanarahana fanelezana votoaty, dia navoaka teo amin'ny tranonkala Web CONNECTAS . Azo jerena ihany koa eto amin'ny tranonkalanay ny lahatsoratra, mifanaraka amin'ny fifanarahanay momba ny famoahana.
Ora folo mialohan'ny nahazoany ny fitondràna an'i Goatemalà, Jimmy Morales, kandidà iray avy amin'ny Frente de Convergencia Nacional, FCN  (National Convergence Front, NCF), sambany nanomboka hatramin'ny nilazàny ampahibemaso ny firotsahany no mba niseho niaraka tamin'ny vadiny, Patricia Marroquín, sy ireo zanany telolahy (izay nipetraka tany ivelan'ny firenena mandritra ny fanentanana ara-politika noho ireo antony “fiarovana”, araka ny voalazan'i Morales).
Tamin'ny fahatongavany tao amin'ny biraom-pifidianana, i Morales, niankanjo ‘jean’ sy ambonin'akanjo fanaovana baolina kitra any Goatemalà, dia noraisina taminà horakora-pifaliana, tehaka, afomanga, horokoroka ary fihimpihina avy amin'ireo mpomba azy sy ireo mpankafy feno fanajàna. Tonga nanafika ihany koa ireo mpanao gazety, niezaka hirakitra ilay fotoana ho anaty fakantsary, nanantena ny mba hahazo ‘scoop’ na fanambaràna miavaka, tsy nanjary avokoa izany rehetra izany.
Sahala amin'izay nitranga tamin'ny fampielezan-kevitra nataony, nataon'i Morales avokoa izay hialàna amin'ireo fanontaniana mikasika ny ho endriky ny governantany.
Folo ora taty aoriana, ny 26 oktobra 2015, Jimmy Morales mpandresy, mitafy akanjo mihaja mangamanga, lobaka fotsy ary kravaty manga tanora, nanao famoriany mpanao gazety voalohany amin'ny maha filoham-panjakana voafidy azy hitondra ny Repoblikan'i Goatemalà. Noraisina indray tamin'ny tehaka izy, horakora-pifaliana, hafatra fiarahabana, fihimpihina, horokoroka ary ireo fihobiana hafa. Hoy ny kiak'ireo sasantsasany “Isaorana Andriamanitra!”.
Nototofan'ireo mpanao gazety sy ny tselatr'ireo fakantsary i Morales, nanaraka teo ireo fakàna sarintenany sy ireo fanontaniana, raha ireo media marobe teo an-toerana kosa mba nanam-panantenana ny hahazo tafatafa miavaka miaraka amin'ny Filoha vaovao. Nanao lahateny indray ny Filoha – izay novakiany – feno filazàna amin'ny ankapobeny, fanambaràna feno dokadoka, fitsaratsarampoana ary fiantsoana sy fideràna tsy mitsahatra an'Andriamanitra.
Tandindon-javatra ny hafany voalohany: namboarina haneho ny mety handrafitra ny governemantany ny fipetraky ny latabatra nandraisan'i Morales an'ireo mpanao gazety. Avy eo ankavanany, teo akaikin'i Patricia vadiny, no nipetraka ny Kolonely Edgar Justino Ovalle Maldonado, mpanorina sady endriky ny NCF, izay voafidy ihany koa ho mpikambana tamin'ny Kongresy tamin'ny volana Septambra lasa teo, ary i Flor de Maria Chajón, mpikambana ihany koa ao amin'ny Kongresy vao nofidiana vao haingana, namana akaiky sy mpikambana amin'ny tarika izay nanampy an'i Morales tamin'ny famoronana ny Morelejas, fandaharana iray anaty fahitalavitra. Niasa ho mpanolotsaina ara-bola ho an'ny fampielezan-kevitra nataon'i Morales ihany koa i Chajón. Izy no mpamokatra nanampy an'i Morales tamin'ny fanitarana ny asany amin'ny maha-mpanao hatsikana. Izy ihany koa no mpanorina ny komity sivika, Nación.
Teo ankaviany, i Jafeth Cabrera, Filoha lefiny tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, ary mpiara-miasa tena hita maso izay hiasa ho mpisehatra ara-politika voalohany ao anatin'ny fiaraha-mitantana. Ary iray metatra miala ny latabatra, ny rahalahiny Sammy, mpiara-miasa aminy ihany koa sady mpanolotsaina azy, mijery ny sehatra amina tsikitsikim-pifaliana.
Sahala amin'ny toa tsy ho afaka ny hanazava mazava mikasika izay ho laharam-pahamehan'ny governamantany akory i Jimmy Morales. Tsy nofaritany ihany ka hoe iza no nofidiany mba handray anjara amin'ny kabinetrany, na nanondro mazava ireo politikam-panjakana izay ho ampiharan'ireo sampana mpanatanteraka ao anatin'ny governemantany.
Ankoatr'izay, naka indray fotokevitra tsotra, saro-takarina i Jimmy Morales, izay nanitikitika mikasika an'ireo asa mivaingana mety hampiasainy mba hiadiana amin'ny kolikoly, ny olana miverimberina izay nandefasana tany amponja an'ireo efa Filoham-pirenena taloha toa an'i Alfonso Portillo sy Otto Perez Molina, ary koa ireo Filoham-pirenena teo aloha Francisco Reyes Lopes ary Roxana Baldetti.
Raha omeko ohatra ianao amin'ny maha mpitarika, betsaka kokoa ny zavatra azo atao sy ny tsy fananana ahiahy hangatahana amin'ireo mpifehy antonony sy ireo mpifehy ambany mba hihetsika tsy mila fidirana amin'ny fampiharana kolikoly”; fanarahana ny fenitra ara-dalàna: “misy ny fehizoro iray izay tokony hajaina”; fandraisana andraikitra: “zava-dehibe ny maha-tomponandraikitra an'ireo mpisehatra ara-politika mba ho, amin'ny alàlan'ireo media, fantatry ny vahoaka izay nataon'ny governemanta, iza no nanao an'io, ahoana no anaovana azy, ary nahoana no natao io.”
Ireo, hoy izy tamim-pitsikiana, “no volavolan-kevitra telo” mba hamaranana ny kolikoly.
Ao anatin'ny roa volana latsaka, ny Filoha vaovao voafidy dia tokony ho afaka hanaporofo ny traikefany amin'ny fahaizana mifandresy lahatra ara-politika, ny tsy fiankinan-dohany sy ny fahaizany mampihatra ny marimaritra iraisana, voalohany indrindra, amin'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko politikany sy ireo vondrona izay nanohana ny fampielezankevitra politikany, avy eo amin'ireo antoko sy vondrona mpanohitra izay afaka mametraka dian-tànana amin'ny fanapahankevitry ny governemanta.
Teo anelanelan'ny volana Aprily sy Septambra, lohateny vaventin'ireo vaovao malaza iraisam-pirenena ireo Goatemalteky sasany rehefa nameno ny Plaza Central de Ciudad Guatemala mba hanohitra ny kolikoly sy ny rafitra ara-politika, nandefa hafatra iray ho an'ny kandidà izay mety handresy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena atsy aoriana.
#VaoFanombohanaFotsinyIty. 14 Janoary “hiverina eny amin'ny Plaza isika handefa hafatra iray mazava ho an'ny Filoham-pirenentsika vaovao, ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy sy amin'ireo mpiasam-panjakana sivily hafa rehetra: isika olom-pirenena dia ho mailo ary ho hifandrindra kokoa hatrany”.
Tongava soa eo amin'ny toerana, Jimmy Morales!
Mba hamakiana ny tantara feno (amin'ny teny Espanola), tsindrio ny faneva eto ambany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/02/140943/
 Frente de Convergencia Nacional, FCN: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Convergencia_Nacional